NLD နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ | Ko Rohingya
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မတ်ဖြင့် ထုတ်ပေးခဲ့သည့် NLD ပါတီဝင် မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားတွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး
This entry was posted on February 8, 2013, in ဖဘတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ, ရိုဟင်ဂျာ and tagged ဒီမိုကရေစီ, ရိုဟင်ဂျာ, အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, NLD. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဗမာပြည်အား သွေးချောင်စီးစေချင်သူ ရခိုင်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် တိ-ကု အေးမောင်	လှည့်စားခြင်းခံရသော ရိုးသားသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘာသာရေးလေးစားသူများ →
Top Posts & Pages	မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ၊ နိုင်ငံခြားသားဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ စုဆောင်းမိသမျှ	Recent Posts	ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီး၍ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးကို နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ပွားစေရန် တရားဝင် လှုံ့ဆော်သူနှစ်ဦး
Ko Rohingya	Ko Rohingya